စဦးအခွေ အီးဂဲလ်စ်(Eagles -၁၉၇၂) ၏ သာသာယာယာပဲ (Take It Easy) ၊ စုန်းမလို မိန်းမ(Witchy Woman) ၊ သက်သက်သာသာ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း (Peaceful Easy Feeling) စသည့်သီချင်းသုံးပုဒ်သည် ထိပ်တန်းသီချင်း (၄၀)၌ပါဝင်လာခဲ့၏ ။ ထင်ရာစိုင်း (Desperado) (၁၉၇၃) အခွေမှာ အောင်မြင်မှုအရ နည်းပါးသော်လည်း ထိုထဲကသီချင်းနှစ်ပုဒ် Desperado နှင့် အရက်ခိုးငွေ့တွေကြားက နေ့သစ် (Tequila Sunrise) တို့သည် ဤတီးဝိုင်၏ လူကြိုက်အများဆုံး တေးနှစ်ပုဒ်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ၁၉၇၄ထွက် On the Border အခွေသည် ဂစ်တာသမား ဒါန်ဖက်လ်ဒါ ကိုဆောင်ကြဉ်းလာနိုင်ခဲ့၍ ထိုထဲက သီချင်းနှစ်ပုဒ်ဖြစ်သည့် Already Gone နှင့် Best of My Love တို့သည် ထိပ်တန်းသီချင်း (၄၀)တွင် ပါဝင်လာနိုင်ခဲ့သည်။
အီးဂဲလ်စ်အဖွဲ့ ၁၉၈၀ ဇူလိုင်တွင် ကွဲခဲ့ကြသည်။ သို့သော် ၁၉၉၄ ၌ ငရဲမီးများ အေးခဲသွား (Hell Freezes Over) အခွေအတွက် ပြန်လည်ပေါင်းစည်းခဲ့ကြကာ ထိုအခွေသည် တိုက်ရိုက်ပသံသွင်းနှင့် စတူဒီယိုအသံသွင်း ရောနှောထားသော အခွေလည်းဖြစ်သည်။ ညီညီညွတ်ညွတ်ဖြင့် လှည်လည်ဖျော်ဖြေကြသည်။ ၁၉၉၈တွင် ရော့ခ်အန်ရိုးလ်ဂုဏ်ပြုချီးမြောက်မှု (Rock and Roll Hall of Fame) ခံရသည်။ ၂၀၀၇တွင် ဧဒင်ဥယျာဉ်ဆီမှ လမ်းမ(Long Road Out of Eden )ကိုဖြန့်ချိခဲ့သည်၂၈နှစ်ကြမှ ထွက်ရှိလာသော စတူဒီယိုတေးအယ်လ်ဘမ်ဖြစ်သည်။ ခြောက်ကြိမ်မြောက် အဆင့်တစ်ရသော အီးဂဲလ်စ်အဖွဲ့၏ တေးအခွေလည်းဖြစ်၍ ထိုသီချင်းခေါင်းစဉ်ဖြင့်ပင် အခွေကိုရောင်းအားမြှင့်ရန် ဖျော်ဖြေရေးခရီးစဉ်ပွဲများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြလေသည်။ ၂၀၁၃၌ History of the Eagles ဖျော်ဖြေရေးခရီးစဉ်ပွဲများကို ကျယ်ပြန်စွာဆောင်ရွက်ခဲ့ကြရာ History of the Eaglesအမည်ဖြင့် တီးဝိုင်းရုပ်သံမှတ်တမ်းကို ထုတ်ဝေခဲ့၏
ဖရေးသည် ၂၀၁၆တွင် ဆုံပါး၍ တစ်နှစ်ခန့်နားခဲ့ကြသည်။ ဖရေး၏ သီချင်းများဆိုရန် Vince Gill နှင့် Deacon Frey တို့နှင့်အတူ အီးဂဲလ်စ်အဖွဲ့ကို ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းသည်မှာ ၂၀၁၇တွင်ဖြစ်သည်။
↑ 100 Greatest Artists – 75 > Eagles. Rolling Stone (946). April 15, 2004. Retrieved October 27, 2007.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အီးဂဲလ်စ်&oldid=507797" မှ ရယူရန်
၂၄ မတ် ၂၀၂၀၊ ၁၈:၃၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၄ မတ် ၂၀၂၀၊ ၁၈:၃၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။